THET NANDAR | သီရိရတနာ
Category THET NANDAR
ဆီ နှင့် ဆိုးဆေး
ဆီကို တော့ ဆီသန့်ပဲ သုံးရဲတယ်။
ရန်ကုန်မှာနေတုန်းကတော့ ပဲပိစပ်ဆီ သုံးသလို capital hyper mart မှာ စင်ကာပူက လာတဲ့ ကြက်ဖ ပုံ နဲ့ တံဆိပ်ကို ၀ယ်သုံးတယ်။ ၅ ပိသာဗူးလောက်ရှိမယ်။
နေကြာစေ့ဆိုလည်း စားလို့ မရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့မှန်း မသိဘူး။ နေကြာစေ့ တထုပ်ကုန်ခါနီးကျရင် နှာခေါင်းတွေက ယားလာတယ်။
တချို့ အစားအသောက်ကျတော့ မျက်တောင်မွှေးယားတာ။ မျက်လုံး ယားတယ် ထင်ပီး မျက်စိအပေါ်က ရှေ့ဆံပင် ရှည်နေလို့ ထင်ပီး မျက်လုံကို ခဏ ခဏပွတ်တာပေါ့။
နောက်မှ သိတာက ဆိုးဆေးပါတဲ့ အစားအသောက် တခု ခု သွားစားမိလို့ မျက်တောင် တို့ နှာခေါင်းတို့ ယားတာတဲ့။
ဆီမသန့်တဲ့ အစားအသောက်ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောတယ်။
ကြေးအိုးကျတော့ လည်း နောက်ပိုင်း ဆိုင်မှာ သွားမစားဖြစ်ဘူး။
အိမ်ကို ပါဆယ်ယူလာ။ အိမ်ကျရင် ရေနွေးထပ်ရောပီး ကြေးအိုး ကြာဇံအဖတ် နှင့် အသားတွေပဲ စားတယ်။
မုန့်ဟင်းခါးလည်း အဲလိုမျိုးပဲ အိမ်ကို ပါဆယ် ၀ယ်လာပီး အိမ်ကျရင် ရေနွေး ထပ်ရောလိုက်တယ်။
အချိုမှုန့် နဲ့ ချက်ထားတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားလည်း စားချင်တယ်။
အဲဒါတွေ စားပီး အကြောတက်မှာ ကြောက်တယ်လေ။
များသောအားဖြင့်က လက်ဖက် ၂ ပြန်ကြော်တွေ နဲ့ အရသာမှုန့် လွန်ကဲ ပီး စားလိုက်ရင် ပါးစပ်ထဲမှာ ချို ရဲ ရဲ အရသာ ကျန်နေတဲ့ အစားအသောက်တွေဆိုရင် စားပီးရင် ခေါင်းအုံတယ်။
ဇက်ကြောတက်လာရင် … ဇက်ကြော ကို နှိပ်။ မေးရိုးကို အဆင့်ဆင့်နှိပ်ပီး နှာခေါင်းနားဆီ၊ နားထင်က နေ အဆင့်ဆင့် နှာတံ ထိပ်နားဆီ နှိပ်ပေးမှ။ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ လေ လေး ထွက်သွားပီး နေလို့ ထိုင်လို့ ကောင်းသွားတာ။
ကိုယ် သွားလေရာမှာ hand wash အမြဲ ပါ ပါတယ်။ လက်ကို ဆေး နေတတ်တာက နမိုးနီးယားရောဂါ ရမှာစိုးလို့ပါ။
အိပ်ရေးလည်း အပျက်ခံလို့ မရသလို၊ ကိုယ်ခံအားလည်း ကောင်းမှ ။
လူက ကျန်းမာတယ်။ ထင်ရပေမယ့် တခါတလေ အိပ်ရေးပျက်၊ အစားကောင်းကောင်းမစားရင် ကိုယ်ခံအားလည်း မကောင်းတော့ ကိုယ် အတွက် နမိုးနီးယားပိုး ပိုဝင်လွယ်ပါတယ်။
နမိုးနီးယားပိုးဝင်ရင် ကိုယ့် အကြောက်ဆုံးက ဦးနှောက်အမြေးပါး ယောင်မှာကိုပါ။
ကိုယ့်နာမည် ” သက် ” ဆိုတဲ့ အတိုင်း … ကိုယ် ငယ်ငယ်က အပြင်းဖျားရင် တက် တတ်တာမို့ … ကိုယ့် အတွက် နမိုးနီးယားပိုးက မ၀င်အောင် … ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မှ တော်ကာကျတာပါ။
နမိုးနီးယားပိုးကြောင့် … ဦးနှောက်အမြေးပါး ယောင်ရင် ဦးနှောက် အပေါ်ယံ အရေအိတ်တွေ ကြီးလာလိမ့်မယ်။
အဲဒီ အခါ ဦးနှောက်ကို သွားဖိမိရင် မှတ်ဥာဏ် စွမ်းအားတွေ .. လျှော့နည်းလာလိမ့်မယ်။
ရန်ကုန်မှာ နေတုန်းက ကိုယ် အကြမ်းရေးထားတဲ့ ပိုစ့်ပါ။
By Thet Nandar • Posted in THET NANDAR	• Tagged THET NANDAR, Thiri Yatanar
2009 က လက်ဆောင်
ဒီ ပိုစ့် ကို ပြန်ဖတ်ပီး … အဲဒီတုန်းက 2009 အချိန်တွေကို သတိရမိပါသေးတယ်။ အမျိုးက ဒီလိုပဲ အိမ်က ကလေး အတွက် သတိတရ ရန်ကုန်မြို့က… US made တွေချည်း သီးသန့် ရောင်းတဲ့ ဆိုင်က လက်ဆောင် ၀ယ်ပေးတာကို ကိုယ်က ဓာတ်ပုံတွေရိုက်၊ ဘလော့ပေါ် အမှတ်တရတင်ခဲ့တာ။
အဲဒီအချိန်တုန်းကလည်း အဲဒီ ဈေးနှုန်းတွေကို @ – @ 2009 တုန်းက မြန်မာမှာ အိမ်က ကလေးတွေအတွက် ယိုးဒယား made နဲ့ china made တွေကို သေချာရွှေးပီး ၀ယ်ပေးတယ်။ အကျီဆို ချွေး စုပ်တဲ့ အသာမျိုး၊ ဖိနပ်ဆို ချော်မလဲကျမယ့်။ သက်တောင့်သက်သာ စီးလို့ရမယ့် ဖိနပ်မျိုး ၀ယ်ပေးတယ်။ ဈေးကလည်း တချို့လည်း ဈေး ကြီးသလို … တချို့လည်း အသင့် သင့်ပါပဲ။
အခု အမေရိကားကို ရောက်တော့ ဒီ ဓာတ်ပုံထဲက ပစည်းတွေ ကြည့်ပီး ရီချင်တယ်။ လက်ဆောင်ရတဲ့ 2009 တုန်းကလည်း ကိုယ့် ပိုစ့်ထဲမှာ ထည့်ရေးဖူးသေးတယ်။ အဲဒီ အချိန်တုန်းက ကိုယ့်ရဲ့ Thet Nandar Family ( wordpress blog ) readers – good value guests တွေ ဖတ်ဖူးတာမို့ မှတ်မိမှာပါ။ အခု .. အဲဒီပိုစ့်ကို ပြန်စိစစ်ပီး ရန်ကုန်က ဆိုင်ပိုင်ရှင်များလည်း မထိခိုက်အောင် ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီဆိုင် ရန်ကုန်မှာ ရှိသေးလား။ မရှိတော့ဘူးလားတော့ မသိပါဘူး။
USမှာ ရှိတဲ့ outlet က ပစည်းမျိုး၊ only USA ပစည်းမျိုး၊ လျှော့ဈေးကာလ ပစည်းမျိုးနဲ့ ရန်ကုန်ဘက်က လူက အင်တာနက်ကနေ ကြည့်ပီး လှမ်းမှာတဲ့ ပစည်းမျိုးပဲ ရန်ကုန်ကို ပြန်သွင်းတာ ကိုက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာက ယိုးဒယား၊ တရုတ်က ပစည်းမျိုးတွေ အလွယ်တကူ ၀ယ်လို့ရနေတော့ ပစည်းချင်းတူရင်တောင် US က သွင်းလာတဲ့ ပစည်းနဲ့ ဈေးခြင်း အရမ်းကွာတယ်။ ယိုးဒယား၊ တရုတ်က လာပေမယ့် … အမေရိကားက သယ်လာတဲ့ ပစည်းမျိုးကို … အရည်အသွေး လည်း ကောင်းကောင်းမှီပါတယ်။
အပေါ် ဓာတ်ပုံထဲ Cali Gear ဘိနပ်တစ်ရံကို ၁၂၀၀၀ ကျပ်။ အလျှော်လည်း ခံတယ်။ ဘိနပ်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ အရုပ်လေးတွေလည်း ပြောင်းပီး ဒီဇိုင်းဆင်လို့ ရတယ်။ ဆန်းလည်း ဆန်းတယ်။
ဒါက ဖိနပ်မှာ အလှဆင်တပ်ဖို့ ။ ကြယ်သီးလိုမျိုးပဲ။ ဖိနပ် ရှေ့က အ၀ိုင်းပေါက်လေးတွေမှာ ဖြုတ်တပ်ပီး ကိုယ် ကြိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ အလှဆင်ပီး ဖိနပ် စီးဖို့ အတွက်တဲ့။ ၄ ခုကို ၆၀၀၀ ကျပ် အပိုထပ်ဝယ်လာပေးတာတဲ့။ သမီးက ဒီဇိုင်း ဆင်ရတာ ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ သမီးအတွက် အတော်ပါပဲ။
The Children’s Place တံဆိပ်။ ဦးထုပ်က ၈၀၀၀ ကျပ်။ ယိုးဒယား ဦးထုပ်တွေလည်း ဒီဇိုင်း အစုံရှိပါတယ်။ သမီးလေး Shwe Pu Zun နဲ့ ILBC Trip သွားတုန်းက ဆောင်းထားတဲ့ ဦးထုပ်ဆိုရင် တစ်လုံးမှ ၂၀၀၀ ကျပ် ကျော်ပဲ ပေးရတာပါ။ ဒီဇိုင်းလည်း လှတယ်။
ခြေအိတ်က original price က ၁၂ ဒေါ်လာ။ Kyat = ၁၁၀၀၀ ကျပ်။
၈၀၀၀ ကျပ် တဲ့။ ဘက်ထရီနဲ့ ကလေး သွားတိုက်တံတောင်မှ မြန်မာမှာ ၇၅၀၀ ကျပ် ပဲ ပေးရတာပါ။ စီးတီးမတ်မှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ်။
မျက်မှန်ကတော့ တန်တယ်လို့ ထင်သည်။ ဘာလို့လည်းဆိုရင် သင်္ကြန် shopping mall တွေမှာ ရောင်းတဲ့ မျက်မှန်တွေက တစ်ခုမှ ၁၀၀၀ ကျပ် ကျော်လေးပဲ ဆိုပေမယ့် နေရောင်ခြည်ထဲ သွားရင် မှန်တွေက ပူတော့ ကလေး မျက်လုံး ထိခိုက်နိုင်လို့ ၀ယ်ကို မ၀ယ်တာ။ ဒီ အမေရိကန်က သွင်းလာတဲ့ မျက်မှန်က စိတ်ချရမယ် ထင်တယ်။
အတန်ဆုံးက ဒီဖိနပ်ပဲ။ ၆၀၀၀ ကျပ်။ သားသား ဖိနပ်တွေက တစ်ရံကို အနည်းဆုံး ၅၀၀၀ ကျပ် လောက် ရှိတာ။ ဒီ ဖိနပ်ကျတော့ ဒီဇိုင်းလည်း ဆန်းတယ်။ ဒီပုံစံမျိုး သားသား ဆီမှာလည်း မရှိသေးဘူး။
အဲဒီ ဆိုင်မှာ computer laptop နဲ့ အခြား အမေရိကန်ဖြစ် ပစ္စည်းတွေ တော်တော်များများ ဒီဇိုင်းစုံ ရှိတယ်လို့ ပြောတယ်။ သွားကြည့်မယ်ဆိုပီး အမေရိကားကို ထွက်လာတဲ့ အထိ သွားမကြည့်ဖြစ်ဘူး။ တချို့ ဆိုင် တွေက ဒေါ်လာဈေးနဲ့ တွက်ပီး ဈေးနှုံး သတ်မှတ် တတ်ပေမယ့် တချို့ ဆိုင်တွေက လူကြိုက် များနိုင်မယ့် ပစ္စည်း၊ ဒီဇိုင်းလှတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဈေးပိုတင်တတ်တယ်။
အခု အမေရိကား ရောက်လာတော့လေ … Made in USA ဆိုတာ အစားအသောက်တွေပဲ ပေါပေါများများ မြင်ရပါတယ်။
ဈေးအသင့်သင့် ပစည်းမျိုးတွေက Made in China
အကျီတွေက နိုင်ငံစုံပဲ .. Made in USA ဆိုတာ တော်တော်ကို ရှားနေပါပြီ။
ကိုယ် ဒီပိုစ့်ကို ပြန်ဖတ်ပီး တမင်တကာ ပြန်တင်ထားတာပါ။
အမေရိကားမှာ စက်ရုံခေတ် ပြန်လည် ထွန်းကားလာမလား ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ပါ။
အခုဆို 1930-1912 အထိ အောင်မြင် လူကြိုက်များတဲ့ … အစားအသောက် စက်ရုံတောင် ပိတ်သိမ်းကုန်ပါပီ။
East Point Shopping Mall – Play Ground
East Point Shopping Mall က လျှောမှာ စီးပီး ဆင်းလာတဲ့အခါ အခုလိုမျိုး ဆံပင်လေးတွေ ထောင်နေတယ်။ လျှောစီးပီး ဆင်းလာတဲ့ သမီးကို မာမီ ကိုင်လိုက်တဲ့အခါ ဓာတ်လိုက်သလိုမျိုး မီးလေးတောင် ဖြတ်ခနဲ လတ်သွားပီး မာမီတောင် ကျင်သွားတယ်။
24.1.2011 က East Point Shopping Mall မှာ လျှောစီးနေတဲ့ သမီးလေး
ဒီဓာတ်ပုံတွေက East Point Shopping Mall ကို( 24.1.2011 ) က ဈေးဝယ်သွားရင်း …. သမီးနဲ့ သား အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ ရှိတဲ့ ကစားကွင်း မှာ လျှောစီးပီး ဆင်းလာတဲ့အခါ သမီး နဲ့ သား ဆံပင်တွေက အခုလိုမျိုး ထောင်နေပါတယ်။ ပထမ မာမီလည်း မိဘတွေ ထိုင်တဲ့နေရာမှာ ထိုင်ပီး ကြည့်နေတာပါ။ ဒီကစားကွင်းက အသစ်လို့ ပြောလို့ ရတာပေါ့နော်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် သင်္ကြန် မတိုင်ခင်လောက်က ဒီ မောလ်ကြီး စဖွင့်စက ဟိုဘက်ခြမ်းက ဘောလုံးလေးတွေ ပါ play ground တစ်ခု နဲ့အတူ ဒီနေရာမှာ ရေပန်း ကစားကွင်း လုပ်ထားတာပါ။ ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာပဲ … ဒီနေရာမှာ အစက ဖွင့်ထားတဲ့ ရေပန်းကစားကွင်းကို ပိတ်ပီး အခုလိုမျိုး play ground အသစ်ကို ထပ်ဖွင့်ထားတာပါ။ ဒီ play ground ကစားတဲ့ ပစည်းတွေက စင်ကာပူက အိမ်ရာတွေမှာ ရှိတဲ့ play ground လို ပုံစံမျိုးပါ။
ကိုယ် နားလည်သလိုမျိုးဆို ဟိုဘက်က play ground က indoor အိမ်အထဲမှာ ကစားတဲ့ ဘောလုံးကလေး တွေ ၊ ဖော့ပြားတွေ၊ ၀ဏ်ကပါ ပုံစံမျိုးတွေ မို့ အထဲမှာ ကစားတဲ့ indoor play ground. အခု ဒီဘက်က play ground ကျတော့ outdoor playground ပုံစံမျိုး။
အဲဒီ play ground က လျှောစီးပီး ဆင်းလာတဲ့ သမီး နဲ့ သား ဆံပင်တွေက ထောင်နေတော့ မာမီလည်း ကင်မရာ ကိုင်ပီး ရိုက်တာပေါ့။ သမီး ကတော့ သဘောတွေ ကျနေတယ်။ မာမီက လျှောစီးပီး ဆင်းလာတဲ့ သမီးကို ကိုင်လိုက်တော့ မီးဖြတ်ကနဲ လတ်သွားပီး ထိလိုက်တဲ့ မာမီတောင် ကျင်သွားတယ်။ ဓာတ်လိုက်သလိုမျိုး ဖြစ်သွားတယ်။
ဒါနဲ့ အဲဒီက staff ကိုမေးကြည့်တယ်။ ” အမ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ ဓာတ်လိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လျှောစီး ပီး ဆင်းလာတော့ ဖိုင်ဘာပြားတွေ က ပွတ်အားကြောင့် ” လို့ ပြောတယ်။ ပီးတော့ နောက်တယောက်က ” ပန်ကာကြောင့် ” လို့ ပြောတယ်။ သူတို့ ” maintainese ကို အကြောင်းကြားပီးပီ။ အဲဒါ သူတို့လည်း လာကြည့်ပီးသွားပီ။ ဘာမှ စိုးရိမ်စရာမလိုဘူးလို့ ပြောတယ် အမ။ “
မာမီလည်း ခဏလောက် သမီး နဲ့ သားကို ခဏ ပေးဆော့တာပေါ့နော်။ ၁၀ မိနစ် ကြာတော့ သေချာပါတယ် လုံးဝ ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ ကစားကွင်းပါ။ တခု ခုတော့ လွှဲနေတာ အမှန်ပါပဲ။
(မှတ်ချက်။ ။ အဲဒီ အချိန် ကာလက စိတ်ပူပန်မှုလေးတွေပါ)
ဖိုင်ဘာ လျှောပေါ့နော်။ သူ ကို စီးတဲ့အခါ ဆံပင်တွေ က ဓာတ်ပစည်းတခု ခု ကို ကိုင်သလိုမျိုး ထောင်နေတာ။
လေတိုက်လို့ ဆိုတာ လေတိုက်တဲ့ ဆံပင်က အဲလိုမျိုးမှ မဟုတ်တာ။
နောက်တခု ဖိုင်ဘာလျှောမှာ ပွတ်တိုက်များလို့ ဒီလို ဆံပင်ထောင်တယ် ဆိုတာ။ မယုံနိုင်ဘူး။
သားကျတော့ အဲဒီ လျှော စီးတာ လျှောအစ မှာကတည်းကိုက ဆံပင်လေးတွေက ထောင်နေတယ်။ ဒူးရင်းသီး ကျနေတာပါပဲ။ ထောင်နေတဲ့ ဆံပင်လေးတွေက။
မာမီ အဲဒီ အချိန်မှာ ဓာတ်ပုံလည်း မရိုက်နိုင်တော့ပါဘူး။ ခေါင်းထဲမှာ ပူပန်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နေလို့ပါ။
ဥပမာ – သားသားက နောက်ပိုင်း diaper မ၀တ်တော့ပါဘူး။ ၂ နှစ်ခွဲလောက်ကတည်းက အပြင်သွားရင် မ၀တ်တော့ပါဘူး။ သူ့ဘာသာ သူ့ အိမ်သာ သို့မဟုတ် ဘောင်းဘီမှာ ပေါက်ချတတ်ပါတယ်။ မတော်လို့များ။ မာမီ က တော့ လူကြီးတွေ ထိုင်တဲ့နေရာမှာ ထိုင်ပီး စောင့်နေတာပေါ့နော်။ သားသားက ကစားကွင်းထဲမှာ ဘောင်းဘီထဲ သေးပေါက်ချပီး သေးစို ဘောင်းဘီ နဲ့များ အဲဒီ လျှောကို စီးမိရင် ………. တော်ကြာ ဓာတ်လိုက်သွားရင် … ဓာတ်စီးနေရင် အနားလည်း ဘယ်သူမှ ကပ်လို့မရ။ မိန်းဆွိစ်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ချဖို့။ အမလေး တွေးရင်းနဲ့ တော်တော် ခေါင်းနပန်းကြီးတာ။
(ကလေး ဓာတ်လိုက်နေရင်တော့ သူ့ကိုင်တဲ့ အရာကိုပဲ ကိုယ် ခုံ နဲ့ ရိုက်ပီး ဓာတ်စီးတာ ခွာချမှာပေါ့နော်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဓာတ်လိုက်မယ့် အရာတွေကို စကတည်းက ဝေးဝေးရှောင်တာ အကောင်းဆုံးပါ)
မာမီလေ သိတယ်မလား။ နဂို အခံ သား နဲ့ သမီးကို စိုးရိမ်လွန်တတ်တဲ့ မာမီဆိုတော့ လည်း …………….
(အဲဒါ 24.1.2011 က အတွေးပါ။)
( အခုတော့ သားသားက အိမ်သာမှာ သေးပေါက်တတ်သွားပါပီ။
ဒယ်ဒီ သင်ပေးလိုက်တာ 😛 )
ရေပန်း ကစားကွင်း ဘာလို့ ပိတ်လိုက်တာလည်း မေးကြည့်တော့ ” လူမလာလို့ ” တဲ့။ ” ရေက ညစ်ပတ်တယ် ပြောလို့ ” တဲ့။ အခု ပြောပြတဲ့ ၀န်ထမ်းက အသစ်ပါ။
ဘာမှန်းမသိတဲ့ ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ လျှောလို့ ပြောရမလား။ အဲလို ကစားကွင်းမျိုး ကစားတဲ့ လျှောမျိုး ရန်ကုန်မှာ အများကြီးပါပဲ။ ဒီလိုမျိုး လျှောစီးပီး ဆင်းလာတဲ့ အခါတိုင်း ဆံပင်တွေ အခုလိုမျိုး ထောင်မနေပါဘူး။
ဒီ ဓာတ်ပုံတွေက 2010 ILBC Science Fair မှာ သမီးလေး Steel ball လုံးလေး ကိုင်လိုက်ရင် ဆံပင်တွေ ထောင်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံပါ။ ဆံပင်တွေ အဲလိုမျိုး ထောင်ဖို့ ဆိုတာက လျှပ်စစ် ဓာတ် ပါမှပဲ ရမှာပါ။ တော်ရုံ နဲ့ ထောင်မယ် မထင်ပါဘူး။
မာမီ ဓာတ်လိုက်သလို ကျင်သွားတဲ့ ပုံစံက အိမ်မှာ ထမင်း ချက်တဲ့ အိုးက ကွိုင် မကောင်းရင် မီးဖွင့်ထားတဲ့ အချိန် ထမင်းအိုးကို ကိုင်မိရင် ဓာတ်လိုက်သလို ကျင်သွားတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။
မာမီလည်း အဲဒီ ကစားကွင်းက အပြန် တော်တော် အတွေးနယ်ချဲ့သွားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲး ဖိုင်ဘာ ပြားက ဘာလို့ ဓာတ်လိုက်သလို ဖြစ်နေတာလဲး။ ဆံပင်တွေ ဘာကြောင့် ထောင်နေတာလဲး ။
24.1.2011 က ကြုံခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့အတူ စဉ်းစားမိခဲ့တဲ့ အတွေးများဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် 7.4.2011 မှာ USA ကို ရောက်ပီး ဒီက playground တွေ ကစားတဲ့အခါမှာလည်း တခါတလေ ကလေးတွေ ဆံပင်ထောင်နေတတ်တယ်။ သားသားက သိပ်မသိသာဘူး။ သမီး ဆံပင်တွေက ထောင်တယ်။ နည်းနည်းလေးထောင်တာပါ။ အဲဒီ ကစားကွင်းကလောက်တော့ မထောင်ဘူး။ ဖိုင်ဘာပြားကနေ လျှောစီးပီး ဆင်းလာရင်လည်း သူတို့ကို ကိုင်လိုက်ရင် ဓာတ်လိုက်သလိုမျိုးလေး တခါတလေ ဖြစ်တယ်။ ဒီမှာကျတော့ သူတို့က လျှောစီးလိုက်။ ဒန်းသွားစီးလိုက်။ စီးဆော see saw သွားစီးလိုက်။ စိန်ပြေးတမ်းကစားလိုက်နဲ့မို့ လျှောက ဖိုင်ဘာပြားနဲ့ သိတ် မထိတွေ့ဘူး။ ဖိုင်ဘာလျှောစီးမှ အဲလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တာ။
ဒီက လျှောက မြေကြီးမှာ ချစိုက်ထားတာပါ။
လျှောစီးပီး ဆင်းလာတော့ လေအေးတိုက်နေလို့လား။
East Point Shopping Mall က Outdoor Playground က လျှောကို ကြမ်းပြင် သမန်းတလင်း မှာ တပ်ဆင်ထားတာပါ။ အခန်းက အလုံပိတ်လည်း မဟုတ်ဘူး။ အပြင်လေတွေ ၀င်ပါတယ်။ နေပူတဲ့အချိန်ဆို လေပူပေါ့။ ညနေစောင်းဆို လေအေးပေါ့။ ကြမ်းပြင်ကနေ လျှပ်စီးနေရင်တော့ မသိဘူး။ (ကိုယ့်ထင်တာ ပြောတာ)
ဒါ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂လ ကျော်လောက်က ကြုံခဲ့ရတာ
အခု စဉ်းစားကြည့်ရင် စိတ်ပူစရာ မလိုလောက်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ east point shopping mall အပေါ်ထပ်မှာလည်း လူနေအိမ်ခန်းတွေ ရှိတော့ အဲဒီ အဆောက်အုံက ကွန်ဒို အမျိုးအစားမို့မိုးကြိုးလွှဲလည်း အပေါ်မှာ ထောင်ထားမှာပါ။ မီးကြိုးတွေလည်း underground ချထားမှာပါ။
ကိုယ့်တို့ ရွှေမှာနေတုန်းက ရန်ကုန်မှာ တခါတရံမှာ မိုးကြိုးပစ်တတ်ပေမယ့် မိုးကြိုးပစ်ရင် စလောင်းပိတ်ရ၊ ကွန်ပြူတာ အင်တာနက် ပိတ်ရနဲ့။ ကိုယ်ကတော့ မပိတ်ဘူး။ မီးကြိုး အားလုံးကို underground ချထားပလိုက်တယ်။ တော်သေးတယ် ဘာမှ မဖြစ်လို့။
မင်္ဂလာဒုံဘက်မှာတော့ မိုးကြိုးပစ်တာ စလောင်းကော၊ တီဗီကော ကြွသွားသလို တချို့ မြို့ထဲက အိမ်တွေလည်း အင်တာနက်ချိတ်ထားလို့ laptop ကြီး ကြွသွားတယ် ကြားတယ်။
မိသားစု အမှတ်တရ အချိန်လေးတွေ ထဲက East point shopping Mall သွားခဲ့တဲ့ web site link လေးများ
12/4/2009 East Point Shopping Mall – Water Play Ground
10/10/2009 East Point Shopping Mall – Water Play Ground
10/10/2009 East Point Shopping Mall – Indoor Play Ground
East Point Shopping Mall – Suki
East Point Shopping Mall – Japan Muffin
By Thet Nandar • Posted in THET NANDAR
Mall’s Play Ground
ဒီမှာ summer ၀င်ခါနီးမို့လို့ ညဆို ၈ နာရီလောက်အထိ နေမ၀င်သေးဘူး။ အခု ည ၇း၃၀ နာရီ နေပူနေတုန်းပဲ။ ကလေးတွေကတော့ မြက်ခင်းပေါ် ဆော့လိုက်။ play ground မှာ ဆော့လိုက်ပါပဲ။
Angel’s test to ipad 2. April 14, 2011
All in one destop.
Daddy’s choice Gate Way- All-In-One Computer/ Intel (R)Core i3 Processor/ 21.5″ Display/ 4GB Memory/ 1 TB Hard Drive /web cam/ wireless keyboard and wireless mouse
အမေရိကားရောက်တော့ ဒယ်ဒီ Sony laptop တစ်လုံးနဲ့ မိသားစု ၄ယောက်သုံးဆိုတော့ မလောက်တော့ဘူးလေ။ မိသားစု ၄ယောက် လုနေကြတာနဲ့ ကွန်ပြူတာ ထပ်ဝယ်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ ကိုယ်ကတော့ destop ကိုပဲ ပိုဝယ်ချင်တယ်။ destop က အပြင်ပန်းကြည့်ရင် စက်ပူတာ ပိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ ကိုယ်တို့က ကွန်ပြူတာကို ၂၄ နာရီ ဖွင့်ထားမှာ ဆိုတော့ destop ပဲ အကြမ်းပိုခံနိုင်မှာ။ ပီးတော့ ကိုယ်က movie ကြည့်မယ်။ game ကစားမယ်။ photo တွေ သိမ်းမယ် ဆိုတော့ memory က အနည်းဆုံး 4GB လောက်မှ။ hard drive ကလည်း ကြီးမှ။ ပီးတော့ memory chip တွေ ထည့်ဖို့အတွက် extra usb pot တွေ များများ ရှိအုံးမှ။ camera memory chip ထည့်ဖို့ SD အပေါက်။ handpone memory chip ထည့်ဖို့ PRO အပေါက် ပါမှ။ တချို့ စက်တွေက တန်တယ် ဆိုပီး ၀ယ်လိုက်တာ။ memory chip ထည့်ဖို့ အပေါက်တောင်မှ မပါဘူး။ ကိုယ့်လိုချင်တာတွေ နဲ့ ပေါင်းလိုက်ပီး ကလေးတွေ အကြိုက် touch screen ကို ဈေးလည်း သင့်တော်ပီး မိသားစု သုံးနိုင်မယ့် ဈေးနှုန်း နဲ့ gate way အမျိုးအစားကို ရွှေးလိုက်တယ်။ monitor color အရည်အသွေးလည်း ကောင်းတယ်။ sharp လည်း ဖြစ်တယ်။ ပုံတွေ ကြည်ကြည်လင်လင် သဲသဲကွဲကွဲ မြင်ရတယ်။ သဘောကျတာနဲ့ ၀ယ်ဖြစ်သွားတယ်။ monitor မှာ web cam လည်း ပါတယ်။ monitor မှာပဲ့ hardware တက်ထားတာ ဆိုတော့ system unit box အတွက် ထားစရာ နေရာမရှုပ်တော့ဘူး။ wireless keyboard ဆိုတော့ ကြိုက်တဲ့နေရာ ယူထားလို့ရတယ်။ အိပ်ရာမှာ keyboard & mouse ကို ယူထားပီး display screen က 21.5″ ဆိုတော့ အဝေးကနေလည်း မြင်နိုင်တယ်လေ။ web cam လည်း ပါတယ်။ dvd ကော dvd writer လည်း ပါတယ်။ window 7, norton virus 1 year free, tv tunner ပါတယ်။ မြန်မာဈေးနဲ့ဆိုရင် us price and tax ပေါင်းလိုက်ရင် ၆သိန်းခွဲ နဲ့ ၇ သိန်းကြားမှာ ရှိတယ်။ပါးပါးလေးနဲ့ ပေါ့ပေါ့လေးပဲ။
best buy ကနေ သွားဝယ်ထားတာ။
နောက်တခု ကြားတာက us မှာ နိုဝင်ဘာလ တတိယပတ် ကြာသပတေး နေ့ ကျေးဇူးတော်နေ့ Thanksgiving day ပီး နောက်တရက် သောကြာနေ့ black friday ဆိုရင် ပစည်းတွေ ထက်ဝက်ဈေးလောက် ချတယ်လို့ ကြားတယ်။ အတွေ့အကြုံတွေကို share ပေးတဲ့သူတွေ Thank you နော်။ ကိုယ်တို့က အခုမှ ရွှေက နေ တက်လာလို့ သိပ်မကျွမ်းဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလောက်ထိ မစောင့်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အိမ်မှာ လုနေကြတာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ ဒီကို ရောက်ပီး တပတ်လောက် အကြာမှာ သွားဝယ်လိုက်တာ။ memory 10GD လောက် ရှိတဲ့ laptop လည်း တွေ့တယ်။ တစ်ထောင်ကျော်တယ်။ သဘောကျလိုက်တာ။ ကိုယ့်တို့ ဂိမ်းတွေက memory များလေ။ ကောင်းလေပဲ။ internet connection ကလည်း memory များလေ မြန်လေပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲ ကွတ်ကီးတွေ ရှင်းရှင်း memory 2GB တောင် အဆင်မပြေဘူး။ flash player ကြောင့် ထင်တယ်။
gate way ကို april ဒုတိယပတ်မှာ သွားဝယ်ထားပီး တပတ်လောက် အိမ်မှာ သုံးကြည့်ပါတယ်။ screen က သိပ်မငြိမ်ဘူး။ တခါတလေ တုန်နေတယ်။ အဲဒါနဲ့ open box ကိုပဲ best buy မှာ သွားပြန်လဲတယ်။ ပိုက်ဆံ များ ထပ်ပေးရမလား ဆိုပီး တထိတ်ထိတ်နဲ့ပေါ့။ ၂ပတ်အတွင်း ပြန်လဲရင် ပြန်ဆံ ထပ်မပေးရပါဘူး။ ပစည်း အစုံ နဲ့ ၀ယ်ထားတဲ့ ဘောက်ချာ ပါသွားတယ်။ All in one destop ပဲ ၀ယ်တော့မယ်ပေါ့။ touch screen က မကောင်းဘူး။ တုန်တယ် ထင်နေပေမယ့်။ destop က system unit box တွေ နဲ့ ကြိုးတွေ နဲ့ ရှုပ်နေတာ တကြောင်း။ သားသားက touch screen နဲ့ ဂစ်တာတီးတာ။ သူ့ စာသင်တဲ့ ဂိမ်းတွေ က touch screen နဲ့ပို အဆင်ပြေတာမို့ best buy မှာ သွားပြန်လဲတဲ့ အခါ dell တံဆိပ်ပဲ touch screen ၀ယ်ဖြစ်တယ်။ စောပိုင်းက gate way က ဟာတွေ အားလုံးပါတယ်။ web cam / wireless key board and mouse display moniter screen က 23 inches ဖြစ်သွားလို့ ပိုတောင် မိုက်သွားသေးတယ်။ ဒေါ်လာ ၃၀ ပဲ ပိုပေးလိုက်ရတယ်။
best buy မှာ open item ဘူး ဖွင့်ပီး ပြန်လာလဲတဲ့ ပစည်းတွေကို သူတို့ဆီမှာ ထက်ဝက်နီး ပါးလောက်ကို ဈေးချတယ်။ ပြန်လာလဲတဲ့ စက်တွေကို ပြင်ပီး ပြန်ရောင်းတာလား မသိဘူး။ အထာမသိတော့ မ၀ယ်ရဲဘူး။ ခဏလောက်ပဲ သုံးရပီး ပျက်သွားရင် အမှိုက်ပုံပဲ။
ကိုယ့် IT နဲ့ ပတ်သက်ရင် ကွန်ပြူတာ အခြေခံလောက်ပဲ KMD မှာ တက်ဖူးတာပါ။ တော်တော်များများကို ကိုယ့်ရဲ့ gtalk မှာ ရှိတဲ့ ပညာရှင်တွေ၊ IT သမားတွေ၊ blog တွေကနေ IT နည်းပညာတွေ share ပေးတဲ့ လူတွေကို အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မနေ့က ဘလော့ error ပြသွားတဲ့ အချိန်မှာ gtalk chat ကနေ ကူညီပေးတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ gtalk ထဲက friend သြစတြေးလျားက သူငယ်ချင်း ညီလေး နဲ့ အင်္ဂလန်က ပညာရှင်၊ ဟောင်ကောင်က database အရမ်းကျွမ်းတဲ့ white hacker ကိုယ့်ရဲ့ facebook သူငယ်ချင်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရန်ကုန် က ၀ဏအောင်၊ ဇင်မျိုး နဲ့ ဇော်မင်းတင်ကိုတော့ အန်တီ အကူအညီ မတောင်းဖြစ်ဘူး။ မနှိပ်စက်ဖြစ်ဘူး။ 😛
စေတန်ဂေါ့တို့၊ MR.DBA တို့ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ gtalk မှာ မရှိတာ ကြာပေါ့။ ကိုယ့်ကို block သွားတာလား မသိဘူး။ 😛
နောက်ထပ် cannon camera ၀ယ်ချင်တယ်။ ပိုက်ဆံ ထပ်စုအုံးမယ်။
လောလောဆယ် သုံးနေတဲ့ ကင်မရာက sanyo digital camera နဲ့ sony ericsson hp ကိုပဲ သုံးနေတာ ဆိုတော့ တချို့ ပုံတွေက အလင်း ရောင် ကောင်းကောင်းမရရင် ရယ်။ setting မှာ သွားပီး မပြောင်းခဲ့ရင်ရယ်။ ပုံထွက် မကောင်းဘူး ဖြစ်နေတယ်။
အောက်က ပုံတွေက google က ပုံတွေပါ။
စကားမစပ် မနေ့က gtalk မှာ ပညာရှင်တွေနဲ့ chat ရင်းနဲ့ ကိုယ့်က safe ဖြစ်အောင် ဘလော့ကို ၂ ခု လုပ်ထားတာ။ သူတို့ ဆီမှာ ကိုယ့် ရဲ့ ဘလော့ပိုစ့်ကို ကော်ပီ ထင်နေပုံ ရပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ personal post နဲ့ personal photo ကို ကော်ပီသမား အထင်ခံနေရသေးတယ်။ ဟူး lol 😛
ကိုယ့်ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ကို တခြားဘလော့တွေမှာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ကိစမရှိပါဘူး။ ကလေးပုံတွေက လွှဲလို့ ကျန်တဲ့ တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ ချင်း ဓာတ်ပုံတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် အစားအသောက်ပုံ နဲ့ တခြား ဓာတ်ပုံတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယူသွားလို့ ရပါတယ်။
ကိုယ့် google alert လုပ်ထားတာမို့လို့ တခါတလေ ပိုစ်တက်လာရင် ဒီဘက်မှာ gmail ပို့တာမို့ သိပါတယ်။
credit : google image
Dec, 10 – Ko Ko Beauty Salon
မေမေ ရဲ့ သုံးနှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် ဆွမ်းကျွေးပွဲ
စာရေးဆရာမ – မီမိုး (အမေ့မှတ်တမ်း)
Gleneagle Hospital @ Singapore
Angel’s birthday dinner
Angel’s Birthday 11.1.11
Henry’s3Years old Birthday
ငါးခူ ဆီပြန်ဟင်း၊ ငရုတ်သီးသုပ်
Happy Mother Day to you!
Ready Made Nan Pyar
chicken curry and paratha
Stewed Chicken, corn, mushroom
Thank You Anthony-WordPress.com
Mc Donald’s playground
ဒန်ပေါက် @ နယူးယောက်
Elementry School – Science Fair
Elementry school – playground
Ko ko Beauty Salon @ maw tin
Discount Easter Ham and Marble cake
cake from central market
အခုမှ မိသားစု အိမ်
Ella on Primary II – မြန်မာ…
kim on မုန့်လိပ်ပြာ၊ မုန့်ဟင်းခါး
maynyeinchan on Travel by plane
Pineapple | သက်နန္ဒာ… on IMG_0239
Classroom | Favourit… on IMG_0041
Thet Nandar Family on Dec 18 – ILBC Conce…
Ma Nu on Primary II – မြန်မာ…
Thin Thin Zar Soe on Dec 18 – ILBC Conce…
Thet Nandar Family on About
khin on About
Syin Shwe Yee Winn N… on Dec 18 – ILBC Conce…
yinyinnwe on ထမင်း၊ ၀က်သား၊ ချဉ်ပေါင်
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်… on တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ – ခ…
အိမ့်ချမ်းမြေ့ on ရေခဲသုပ်